KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Alur American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Ashaninka Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Belize Kriol Bengali Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Cubeo Czech Czech Sign Language Dangme Danish Drehu Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik Emberá (Northern) English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guahibo Guambiano Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Inga Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Creole Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kenyan Sign Language Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Krio Kwangali Kwanyama Laotian Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Macushi Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Maya Mexican Sign Language Mixtec (Guerrero) Moore Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Páez Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quechua (Huallaga Huánuco) Quechua (Huaylla Wanca) Rapa Nui Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sateré-Mawé Sena Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Torres Strait Creole Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Sign Language Zulu
Yohane Adiyisɛm 8:1-13
Wɔtew ahyɛnsode a ɛto so ason no (1-6)
Wɔhyɛn ntorobɛnto anan a edi kan no (7-12)
Ɔtee sɛ wɔreka sɛ: “Munnue, munnue, munnue” (13)
8 Bere a ɔtew+ ahyɛnsode a ɛto so ason no,+ ɔsoro yɛɛ dinn bɛyɛ dɔnhwerew fã. 2 Na mihuu abɔfo baason+ a wogyinagyina Onyankopɔn anim no, na wɔmaa wɔn ntorobɛnto ason. 3 Ɔbɔfo foforo bi bae, na na okura aduhuam kankyee a wɔde sika kɔkɔɔ ayɛ. Obegyinaa afɔremuka no ho,+ na wɔmaa no aduhuam pii+ sɛ ɔmfa nka akronkronfo nyinaa mpaebɔ ho, na ɔmfa mmɔ afɔre wɔ sika kɔkɔɔ afɔremuka+ a esi ahengua no anim no so. 4 Na aduhuam no mu wusiw fii ɔbɔfo no nsam, na ɛne akronkronfo no mpaebɔ+ no foro kɔɔ Onyankopɔn anim. 5 Ɛhɔ ara na ɔbɔfo no faa aduhuam kankyee no, na ɔde afɔremuka so gya no bi hyɛɛ no ma, na ɔtow guu asaase so. Na aprannaa ne nne ahorow ne anyinam+ ne asaasewosow bae. 6 Na abɔfo baason a wokurakura ntorobɛnto ason+ no yɛɛ krado sɛ wɔrebɛhyɛn ntorobɛnto no. 7 Nea odi kan no hyɛn ne torobɛnto no. Na asukɔtweaa ne ogya a ɛne mogya adi afra bae, na wɔtow guu asaase so;+ na asaase no nkyekyɛm abiɛsa mu baako hyewee, na nnua nkyekyɛm abiɛsa mu baako hyewee, na wura momono nyinaa hyewee.+ 8 Na ɔbɔfo a ɔto so abien no hyɛn ne torobɛnto no. Na wɔtow biribi te sɛ bepɔw kɛse a ɛrehyew too ɛpo mu.+ Na ɛpo no nkyekyɛm abiɛsa mu baako dan mogya;+ 9 na ɛpo mu abɔde a nkwa wom* no nkyekyɛm abiɛsa mu baako wuwui,+ na ɛpo so ahyɛn nkyekyɛm abiɛsa mu baako sɛee. 10 Ɔbɔfo a ɔto so abiɛsa no hyɛn ne torobɛnto no. Na nsoromma kɛse bi a ɛredɛw te sɛ kanea tew fii soro, na ɛbɛhwee nsubɔnten nkyekyɛm abiɛsa mu baako ne nsuti so.+ 11 Nsoromma no din de Awɔnwene. Na nsu no nkyekyɛm abiɛsa mu baako dan awɔnwene, na nsu no maa nnipa pii wuwui efisɛ na ayɛ nwene.+ 12 Na ɔbɔfo a ɔto so anan no hyɛn ne torobɛnto no. Na wɔde ade bɔɔ owia nkyekyɛm abiɛsa mu baako+ ne ɔsram nkyekyɛm abiɛsa mu baako ne nsoromma nkyekyɛm abiɛsa mu baako, sɛnea ɛbɛyɛ a emu nkyekyɛm abiɛsa mu baako beduru sum+ na adekyee nkyekyɛm abiɛsa mu baako rennya hann na anadwo nso ayɛ saa ara. 13 Na mihui, na metee sɛ ɔkɔre bi a watu nam wim de nne kɛse reka sɛ: “Munnue, munnue, munnue,+ mo a mote asaase so esiane ntorobɛnto a aka a abɔfo baasa no rebɛhyɛn no nnyigyei nti!”+
^ Anaa “abɔde a ɛwɔ akra.”